Somali News 06.29.21
Published June 30, 2021 at 9:13 AM CDT
Shil tareen ayaa sababay jahwareer ka dhacay agagaarka Magaalada Dakota saaka. Laba locomotives iyo lix gaari ayaa ka baxay tareenka ka dib markii tareenku ku dhacay semi. Cidna kuma dhaawacmin.
Gundhig u sameynta Xarun Cusub ee Sharciga Sharciga Degmada Woodbury ayaa loo asteeyay Sebtember 15-keeda.
Qandaraas dhameystiran oo dhanka dhismaha ah ayaa la gaaray intii lagu guda jiray kulan ay wada yeesheen gudiga gobolada iyo magaalada shalay.
Shaqada wasakhda ah ee ka socota goobta ayaa la qiyaasayaa inay dhammaanayso bisha Ogosto kowdeeda, iyada oo mashruuca in ka badan $ 58 milyan oo doollar qaadanayaa ilaa 20 bilood in la dhammeeyo.
Gudiga iskuulka Sioux City ee cod bixinta ayaa kala qirey sii wadida qandaraaska Kormeeraha guud Paul Gausman (GAWS-MAN - LIKE PAWS). Mushaharka saldhigga Gausman wuxuu ku dhow yahay $ 249,000. Qandaraaskiisa hadda wuxuu soconayaa sanad dugsiyeedka 2022-2023.
Dhimashada qoryaha ayaa si aad ah uga sii kordheysay gobolka Iowa iyadoo lagu wado inuu dhaqan galo sharci u ogolaanaya dadka inay si fudud si fudud u soo iibsadaan qoryaha fudfudud isla markaana ay ku dhex wadan karaan dadweynaha iyagoo aan haysan tababar ama ogolaansho
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa Talaadadii sheegtay in diiwaanka 353 qof ay u dhinteen dhaawacyada rasaasta ee Iowa ee 2020, taas oo ka dhigan 23% koror ka badan kii hore ee sanadkii hore ee 2019. Sannadkan waxaa la arkay 85 qori dil ah, 80% ayaa kordhay. Ismiidaaminta ayaa wali ka koobneyd seddex ka mid ah afartii qori ee ku dhinta gobolka.
Cilmibaare hormood ah oo ku takhasusay hubka ayaa sheegay inuu rajaynayo xakamaynta qoryaha gacan ka hadalka ah ee Iowa oo bilaabanaya Khamiista si wax waliba uga sii daraan.
Somali News 06.28.21
Gudoomiyaha Pete Ricketts ayaa soo afjaray Xaalada Degdega ah ee COVID-19 ee Nebraska.Waxay bilaabatay 13-kii Maarso ee sanadkii hore. Amarada badankood…